Waamicha Tokkummaa Jaarmayoota,Gurmuuleefi Qabsaawota Oromoo hundaaf. – Welcome to bilisummaa
Waamicha Tokkummaa Jaarmayoota,Gurmuuleefi Qabsaawota Oromoo hundaaf.
Guyyaa: 12/14 /2015
OPE N L ETT ER/ XA LA YA BANAA
Qabsoo Ummata Oromoo galiin gahuuf hanqinoota mooraa qabsoo keenya mudatanii jiran keessaa, inni guddaan
tokkummaa dhabiinsa qabsaawotaa akka ta’etti hubanna. Rakkoo kana kan dhalche sababootiin heddun jiraataniis inni
guddaan garuu wal danda’anii, walitti dhufanii mari’achuuf qophii tahuu dhabuudha. Kun akka mooraa qabsoo Oromoo
miidhee fi qabsaawotaafi deeggartoota hamilee cabse hundi keenya wal qixa hubanna. Ammas aadaa waliin mari’annee
furmaata waloo fiduun dheebuu bilisummaa fi abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuu irraa dhiboofnaan ykn
qoollifannaan ammas diina keenya of irratti goobsuu taati.
Wajjin mari’achuu dhabuu irraa kan madde rakkoo akka salphaatti fala itti argachuu dandeenyu qancarsinee jirra.
Adeemsi akkanaa kun kana booda mooraa Oromoo keessatti seenaa ta’ee afuu qaba. Haalli amma keessa jirru isa gara
fuulduraa fi hegeree qabsoo Sabaaf akka yaannu nu dirqisiisa rakkoolee xixiqqoo keessa keenyaas akka madditti
dhiifnuuf nu yeroon amma. Haala kaleessa turee fi garaaragummaa keenya yeroo itti faarsaa fi isa babaldhisaa deemnu
miti. Lubbuu, Dhiigaa fi lafeen ilmaan Oromiyaa yeroo ammaa wayyaaneen dhangala’a fi caccabaa jiru jaarmiyaaleen
Oromoo tokko ta’uuf alduree yeroo waliif tarreessinu miti. Dhugaa dubbachuuf dargaggoon Oromiyaa dachee Oromiyaa
keessatti falmatti jiran ,yeroo jaarmiyaaleen Oromiyaa garaagarummaa xixiqqoo qabnu furachuu dadhabnee jirrutti
qabsoo Sabaa ofitti fuudhanii gaggeessaa jiru, Kun barumsa gahaa nuuf ta’uu qaba.
Addi Bilisummaa Oromoo yeroo gara garaa mooraan qabsoo Oromoo akka jabaattu waamicha gara garaa taasisaa ture,
waamicha ABOn taasisaa turee fi ilmaan Oromiyaa mara irra deddeebi’anii dhaammachaa turan fudhachuudhaan
jaarmiyaaleen siyaasaa hedduun tokkummaa uumannee jirra. Haata’u malee ammas dhaabbileen siyaasaa waamicha
tokkummaa mooraa qabsaawotaaf owwaachuu diduudhaan ykn lafa irra harkisuudhaan as geenye, haala adeemsa
qabsoo harkifachiisu keessaa bahuudhaan akka ammas mooraa tokkummaa qabsaawotaa wajjin gabbifnu irra deebinee
waamicha goona. Akka Adda Bilisummaa Oromootti, waamicha tokkummaa kana dhaabbilee siyaasaa maqaa Oromoo
qaban hundaaf ergamee ture, warra waamicha ilmaan Oromoof owwaatan galateeffachaa ammas dhaabbilee siyaasaa
tokkummaa mooraa qabsaawotaa daddaffiin hojiirra oolchuuf harkifachaa jiran xalayaa banaa kanaan ammas irra
deebinee waamicha Oromummaa isiniif goona.
Dhuma irratti, jaarmayooleen hawaasaa, jaarsolii fi beektotiin Oromoo akka jaarmayoolee siyaasaa tokkummaaf
abboomamuu irraa qoollifatan irratti dhiibbaa gochuun akka mooraan qabsaawotaa jabaattee qabsoon bilisummaa fi
abbbaa biyyummaa Oromiyaa dhugoomuuf dhiibbaa akka irratti gootan gaafanna. Carraadhuma kanaan Addi
Bilisummaa Oromoo tokkummaa jaarmayaalee Oromoo dhugoomsuuf, alduree tokko malee kan hojannu ta’uu keenya
dhugoomsina. Waamicha ilmaan Oromoof owwaachuudhaan jaarmayaaleen Oromoo afur tokkummaa ummannee jirru
ammas irra deebinee jaarmayaalee siyaasaa Oromoo tokkummaa kana keessatti hin hirmaanneef irra deebinee waamcha
Qunnamtiif: abosperson@gmail.com, Tel: 651-808-8774, Website: http://www.oromo-liberationfront.org
Previous OFIRRAA KAASI MALEE*
Next Special Attention: An Appeal letter for International Media Coverage